गृहपृष्ठ » मेरो डायरी » सामाजिक उत्तरदायीत्व » पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र बुहारी हिमानी शाहको यो तस्वीरलाई तपाई कसरी लिनुहुन्छ ?
काठमाडौ । भन्न त समानताको नारा बोकेकाहरुले त्यो पर्दैन भन्लान् । तर हाम्रो सम्पत्ति भनेको नै संस्कार र संस्कृती हो ।
हाम्रो संस्कार यति उचाईमा छ की त्यो दुनियाँको अग्लो पहाड सगरमाथा बराबर जहिलै चुलिएर रहेको छ । हाम्रो संस्कार भनेको आफूभन्दा ठूलालाई आदर–सत्कार गर्नुपर्छ । सानालाई माया गर्नुपर्छ ।
हामी यही बोटमा फलेको बृक्ष हो । हिन्दु संस्कारले हामीलाई यही सिकाउदै आएको हो । अरु धार्मिक संस्कारहरुपनि मिल्दाजुल्दा छन् । हाम्रो हिन्दु संस्कारमा ससुराका अगाडी बुहारीले पालना गर्नुपर्ने नियमहरु छन् ।
ससुराको अगाडी बोल्दा नरम स्वरमा बोल्ने, ठाडो स्वर नगर्ने, ससुरालाई शीर नदेखाउने, ससुरा भन्दा उचो स्थानमा नबस्ने जस्ता नियमहरु छन् । हिमानीले त्यही नियम पालना गर्नुभएको हो ।
उहाँले नियम पालना गर्दा केहीहरुले भने अनेक टिप्पणी गरेका छन् हामी त्यतातर्फ नजाऔँ । सबैले यो बुझौँ । ससुरापनि बुवा नै हुनुहुन्छ ।
विवाहभन्दा अगाडि हरेक युवतीको मनमा उहाँका सासु–ससुरा कस्ता पर्नुहुने हो भन्ने कुराको डर हुन्छ । कतै ससुरा रिसाहा त हुनुहुन्न ? हाम्रो समाजमा सासु–ससुराको मन जित्नु भनेको एउटा बुहारीको लागि कुनै कठिन काम भन्दा हुँदैन । त्यस्तो स्थितिमा भनिन्छ शुरुवात राम्रो भयो भने आधि जीत भए सरह हुन्छ ।
त्यसैले जब तपाईं विवाह अगाडि नै भविष्यका सासु–ससुरासंग भेट्नु हुन्छ, त्यो समयमा उहाँहरुलाई सम्मान दिनुहोस् र माया गर्नुहोस् । यसका साथै उहाँहरुको सौखहरुको बारेमा पनि जानकारी लिनु होस् । यसो गर्दा सासु–ससुराको अगाडि तपाईंंको छवि राम्रो बन्छ र यस्तो कुराले तपाईं उहाँहरुलाई एकदम मन पराउनु हुन्छ भन्ने कुरा दर्शाउँछ ।
विवाहपछिपनि सम्मान दिनुहोस् । यदि त्यसो गर्नुभयो भने हिमानीले जस्तै घर सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाउनुहुन्छ । अहिले हिमानीलाई हाम्रो पूर्व राजपरिवारको सारा कुल खानदान चलाउने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । त्यो जिम्मेवारी उहाँले एकदमै राम्रोसँग निभाउनुपनि भएको छ ।
यो अति सानो गल्तीले इन्जिनियरको परिवार उजाड्यो
भक्तपुरमा ग्‍यास लिक हुँदा भीषण आगलागी, ग्‍यास लिक हुनबाट यसरी बच्नुहोस्
बुवा हराउनुभयो, देख्नुहुनेसम्म पुर्याउन सबैमा पुर्याईदिनुहोला
साई आश्रम परिवारको बालगृहलाई माहाकाली सेवा परिवारद्धारा सहयोग प्रदान